မက်ဆာချူးဆက်စက်မှုတက္ကသိုလ်မှ ၀ါယာလက်စနစ်ဖြင့် စွမ်းအင်ရွှေ့ပြောင်းစေနိုင်ခြင်း နည်းပညာကိုထုတ်ဖော်ပြသလိုက်ခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Science & Religion » မက်ဆာချူးဆက်စက်မှုတက္ကသိုလ်မှ ၀ါယာလက်စနစ်ဖြင့် စွမ်းအင်ရွှေ့ပြောင်းစေနိုင်ခြင်း နည်းပညာကိုထုတ်ဖော်ပြသလိုက်ခြင်း
မက်ဆာချူးဆက်စက်မှုတက္ကသိုလ်မှ ၀ါယာလက်စနစ်ဖြင့် စွမ်းအင်ရွှေ့ပြောင်းစေနိုင်ခြင်း နည်းပညာကိုထုတ်ဖော်ပြသလိုက်ခြင်း
Posted by Mr WorldWide on Jan 29, 2013 in Science & Religion, Sciences & Resources |2comments
အနာဂတ်ကာလတွင် ၀ါယာလက်စနစ်ဖြင့် စွမ်းအင်ထုတ်လွှင့်ပေးနိုင်မည်(Wireless Power Transfer) ဟုစိတ်ကူးကြည့်လိုက်ပါက ဆဲလ်ဖုန်းများ၊ အိမ်သုံးစက်ရုပ်များ၊ Mp3စက်များ၊ လက်ပ်တော့ (Laptop)ကွန်ပျူတာနှင့်အခြားရွှေ့ပြောင်းသယ်ယူနိုင်သည့် အသေးစားအီလက်ထရောနစ် ကိရိယာလေး များသည် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် အားသွင်းနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး အမြဲတမ်း အသုံးပြုခဲ့ကြရသော ၀ါယာကြိုးများကို အ သုံးပြုရခြင်းမှလွတ်မြောက်ပေလိမ့်မည်။ အချို့သော စက်ကိရိယာလေးများသည်ဘက်ထရီ အသုံးပြုရန် လို ချင်မှလိုပေတော့မည်။ MITမှပညာရှင်အဖွဲ့တစ်ခုသည် အနာဂတ်တွင် ၎င်းနည်းပညာကို အပြည့်အ၀ အကောင်အထည်ဖော်ရန် အရေးကြီးသည့် အဆင့်တစ်ခုကို စမ်းသပ်၍ ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပါသည်။
စွမ်းအင်ကို ၀ါယာလက်စနစ်ဖြင့် ပို့ဆောင်နိုင်သည့် နည်းလမ်းအသွယ်သွယ်ရှိကြောင်းကို သိရှိ ခဲ့သည်မှာ ရာစုနှစ်မက ရှိခဲ့ပေပြီ။ အကောင်းဆုံးဥပမာပေးရလျှင် ရေဒီယိုလှိုင်းများကဲ့သို့ လျှပ်စစ်သံလိုက် ရောင်ခြည်လှိုင်းစနစ် (Electromagnetic Radiation) ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ရောင်ခြည်လှိုင်းစနစ်သည် သ တင်းအချက်အလက်များကို ဖြန့်ဖြူးရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သော်လည်း စွမ်းအင်ကို ရွှေ့ပြောင်းသယ်ဆောင် ရန်အတွက်မူ မသင့်တော်ပေ။ ရောင်ခြည်လှိုင်းများသည် (Radiation) အရပ်မျက်နှာ အဘက်ဘက်သို့ ပျံ့နှံ့ရောက်ရှိသောကြောင့် စွမ်းအင်အများစုမှာ လေလွင့်ဆုံးရှုံးကြရပါသည်။ လေဆာရောင်ခြည်မှာမူ အ ရပ်မျက်နှာတစ်ခုတည်းသို့ တိုက်ရိုက်ပို့ဆောင်နိုင်သော်လည်း လက်တွေ့တွင် အသုံးပြုရန် အန္တရာယ်ရှိပြီး ခက်ခဲပါသည်။
အထူးပြုသံလိုက်စက်ကွင်းဖြင့်ချိတ်ဆက်ခြင်း(Magnetically Coupled Resonance)
အကျဉ်းချုပ်ပြောရလျှင် (WiTricity) ဟုခေါ်သည့် ခရီးတိုဝါယာလက်စနစ်သည် သဘောသဘာဝ တူညီသော ပစ္စည်းများကို ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်း နည်းလမ်းအပေါ် အခြေခံထားပါသည်။ ၎င်းကို Resonant Coupling လုပ်ခြင်းဟုခေါ်ပါသည်။ Frequency တူညီသော ပစ္စည်းနှစ်ခုသည် စွမ်းအင်ဖလှယ် ရာတွင် ထိရောက်မှုရှိပြီး သဘောသဘာဝ မတူညီသော အခြားပစ္စည်းများနှင့်မူ ထိရောက်မှုမရှိပေ။ ချိန်ညှိ ထားသည့် ပစ္စည်းများပါသောစနစ်တစ်ခုတွင် Operation ပြုလုပ်ရန် ကောင်းမွန်ပြည့်စုံသည့် နယ်ပယ်တစ် ခု၊သို့မဟုတ် အနေအထား (Strongly Coupled Regime Of Operation) ရှိနေတတ်ပါသည်။ ၎င်းနယ် ပယ်၊သို့မဟုတ် အနေအထားတစ်ခုတွင် စွမ်းအင်ကူးပြောင်းမူကို ထိရောက်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
အသံလှိုင်းအားဖြင့်လည်းကောင်း၊ စက်မှုဆိုင်ရာအားဖြင့်လည်းကောင်း၊ လျှပ်စစ်သံလိုက်ဆိုင်ရာ အားဖြင့်လည်းကောင်း (Acoustic,Mechanical,Electromgnetic Resonances) ချိန်ညှိဆောင်ရွက်မှုများ အနက် MITမှ ပညာရှင်အဖွဲ့သည် သံလိုက်ဖြင့် ချိန်ညှိဆောင်ရွက်မှုကို အဓိကထား အသုံးပြုခဲ့ပါသည်။ ၎င်းတို့အနေဖြင့် ကောင်းမွန်ပြည့်စုံသည့်နယ်ပယ်၊သို့မဟုတ် အနေအထား (Strongly Couple Regime Of Operation) ကိုရရှိခဲ့သောကြောင့် အသုံးပြုလိုက်သော သံလိုက်ဓာတ်ထုတ်ပစ္စည်း အရွယ်အစားထက် အဆများစွာကြီးမားသော အကွာအဝေးအတွင်း စွမ်းအင်ကူးပြောင်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ဤနည်းဖြင့် ထိရောက် အကျိုးရှိသည့် စွမ်းအင်ကူးပြောင်းမှု လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
စမ်းသပ်ဒီဇိုင်းတည်ဆောက်မှုတွင် ကြေးကွိုင်နှစ်ခု ပါဝင်ပါသည်။ ကွိုင်တစ်ခုအား Power Source နှင့် ချိတ်ထားပြီး ပို့လွှတ်အပိုင်း ဖြစ်ပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်သို့ လျှပ်စစ်သံလိုက်စက်ကွင်းအသွင် ရောင် ခြည်ဖြာထွက်မှု (Radiative Electromagnetic Wave) အစား ရောင်ခြည်မထွက်သည့် သံလိုက်စက်ကွင်း (Non-radiative Magnetic) အဖြစ် MegaHertz(MHz) ကြိမ်နှုန်းများ ထုတ်လွှတ်ပါသည်။ ၎င်းသံလိုက်စက် ကွင်းဖြင့် အထူးချိန်ညှိထားသော လက်ခံကွိုင်သို့ စွမ်းအင်ကူးပြောင်းပေးပါသည်။ ၀ါယာလက်စနစ်ဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားပါက ကြိုးတပ်စရာမလိုဘဲ Laptop တစ်လုံးအား အလိုအလျောက် အားသွင်းပေးနိုင်ပါသည်။ အမှန်ပြောရလျှင် ဘက်ထရီအား အခန်းအတွင်း၌ အသုံးပြုရန် လိုအပ်တော့မည် မဟုတ်ပေ။ ရေရှည် မျှော်မှန်းကြည့်ပါက လေးလံပြီး ဈေးကြီးသော ဘက်ထရီများအပေါ် မှီခိုနေရမှုအား လျှော့ချနိုင်တော့မည် ဖြစ်ပေသည်။ အစတွင် ၎င်းကဲ့သို့စွမ်းအင်ကူးပြောင်းမှုသည် Transformers များတွင်သုံးသည့် ယေဘုယျ သံလိုက်ဓာတ်ညှို့ခြင်း (Magnetic Induction) နှင့်ဆင်တူယိုးမှားဖြစ်သည်ဟု ထင်ရပါသည်။ ၎င်း Transformer များတွင်နီးကပ်သောကွိုင်နှစ်ခုအတွင်း အပြန်အလှန် စွမ်းအင်ကူးပြောင်းခြင်း ပြုလုပ်ပါသည်။ ပို့လွှတ်ကွိုင်မှ လျှပ်စစ်စီးကြောင်းသည် လက်ခံကွိုင်သို့ ရောက်ရှိပါသည်။ ၎င်းကွိုင်နှစ်ခုသည် နီးကပ်သော် လည်း ထိစပ်ခြင်းမရှိပါ။
သို့သော်ကွိုင်နှစ်ခု၏ အကွာအဝေးကို ချဲလိုက်သောအခါတွင် ဤသဘောသဘာဝမှာ အကြီး အကျယ်ပြောင်းလဲသွားပါသည်။ ကာရာလစ်ဟုခေါ်သော ကွန်ပျူတာနှင့်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာ ကျောင်း သားတစ်ဦးက ဤစမ်းသပ်မှုသည် စွမ်းအားရှိသောချိန်ညှိဆာင်ရွက်မှု (Resonant Coupling) ၏မျက်လှည့် ဆန်ဆန် လုပ်ဆောင်ချက်ပင်ဖြစ်ပြီး သမားရိုးကျသံလိုက်ဓာတ်ညှို့ခြင်း (Non-resonant Coupling) ထက် အဆတစ်သန်းခန့် ပိုမိုထိရောက်မှုရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အနာဂတ်တွင်မူ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ၀ါယာကြိုးများနှင့်ဘတ်ထရီများကို အသုံးပြုရန် မလိုအပ်တော့သည့်အချိန်တစ်ခုသို့ ရောက်ရှိတော့မည်ဟု မျှော်လင့်မိပါသည်။
Massachusetts Institute of Technology researchers developing wireless power transmission have found that the system becomes more efficient as more devices are being powered.
The new work builds on their original discovery, announced in 2007, of using electromagnetic resonance between coils to transmit power without wires. Besides increasing the efficiency of the system, the experiment used smaller receiving coils, making it more practical for deployment in homes, offices and eventually portable devices
လေ့လာဖတ်ရှု့ရတာ အင်မတန် ဗဟုသုတဖြစ်လှပါကြောင်းးးးးးးးးးးးးးးး
ယခုနည်းပညာ ပြန့်ပွားလာမည့်အချိန်ကို ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ကြိုဆိုလိုပါကြောင်းးးးးးးးးးးးး
Your welcome…Mr mobile !!